Habar-Jeclo Hal Baan Leeyahay, Habar Yoonis-Na Hal Baan Leeyahay, Sacad Muuse-Na Hal Baan Leeyahay. W/Q Ismail Awad. | Caroog News
Habar-Jeclo Hal Baan Leeyahay, Habar Yoonis-Na Hal Baan Leeyahay, Sacad Muuse-Na Hal Baan Leeyahay. W/Q Ismail Awad.
June 12, 2019 - Written by admin
Habar-jeclo hal baan leeyahay, Habar Yoonis-na hal baan leeyahay, Sacad Muuse-na hal baan leeyahay.
Habarjeclo hal baan leeyahay
waddanka 7 sano ayaa soo xukumeyseen xitaa mucaaradad la maydin kulmin marka laga reebo cayda Xuseen Abokor (Sacad Muuse) ay xukuuumadaha SL ku budhkumaalaan. Shan qodob ogaada
1) Danta Soomaalilaan kuma jirto in Habarjeclo hogaanka qabato waqtiyadan dhow. Danta HJ-na waxaa ka mudan danta SL.
2) Reer Soomaalilaan xiise uma qabaan hogaanka HJ, una codayn maayaan xitaa haddii ay is sharaxaan waqtigii Siilaanyo oo dhow darteed.
3) Muuse Biixi & Sacad Muuuse toona abaal kuma lihidin waayo iyaguba Siilaanyo ayey laba goor u codeeyeen 2003 & 2010. Waa deyn baxdeen uun. Wax jeegaan la yidhaahdaana ma jirto doorashada soo socota u codeeya meeshaa danta SL ka dhex aragtaan.
4) Sanaag Galbeed laba ceebood oo xun xun baa ka dhacay i) Wacad & Dhaar la jebinayo iyo ii) Madax dawladeed oo si waxshinimo loogu diley. Reerka Axdiga ka baxaa wuu duloobaa, dawladda haddii aan laga haybdaysana fowdo iyo isku dhex yaac baa ka dhasha arrintaa wax ka qabta, kana ducaysta.
5 ) HJ waxaa lagu yaqaaney iney danta SL wax walba u hurto, Soomaalilaan waqti adag oo meel kasta looga soo dhaaranayo ayey ku jirtaa. Khilaafka guduhuna meel aanu weligii gaadhin buu marayaa, maanta ayey SL tadxiyo & naf-huris u baahan tahay. Waxaan leeyahay SL cid kale ha eersatee HJ yay eersan.
Habar Yoonis hal baan ku odhanayaa:-
1- Habar Yoonis haddaa tihiin waxaa ku doodaan waxaa la jebiyey qodobkii ahaa ‘Isaaq laba ka xeeran’ oo waa laysugu kaayo tegey, qodobkaa khalad baa ka fahanteen, qodobkaasi wuxuu ku salaysnaa dhaqankii miyiga ee laguma dabikhi karo dawladnimada casriga ah iyo u tartanka madaxnimada. Habkan aynu qaadanay ee dimuquraadiyada iyo codaynta ku dhisani wuxuu ku salaysan yahay in cid layska raaco, haddii seddex la yahay marka labo israacdo midna geed lagu xidho ayaa hogaan la helayaa, haddii kale fowdo ayaa dhacaysa danta guudna way lumaysaa. Haddii afar la yahay marka seddex israacdo ayaa la guuleysanayaa haddiise laba labo laysu kala taago waa la jabayaa meeshana in lagu kala tago ayey noqonaysaa. Ninka doonaya habkan inuu ku saami qaybsado haddana aan ogolayn in layska raacaa waa nimaan fahmin wuxuu doonayo. Ninka wax doonayaa isagaa qaabeyn kara in layska raaco iyo in isaga la raaco.
2- Waxaa doonaysaan inaa yeelataan haybadii Habar Yoonistii hore lahayd idinkoo ka baydhay dariiqii iyo hab-nololeedkoodii. Habar Yoonistii hore waxay ahayd ‘talo ku nool’Halka Habar Yoonista sebenkani tahay ‘Khiyaali ku nool’. Cidda talo ku nool ka ah natiijadeedu waxay noqotaa faan & baanis run ku salaysan laakiin cidda khiyaali iyo waxay jecelyihiin ku tala goosta natiijadeedu waxay noqotaa Cabasho & calaacal aan run ku salaysnayn.
3- Habar Yoonis waxay doonaysaa madaxnimo laakiin waxaad moodaa madaxnimada ineydaan fahmin, waxaa u cadhaysantihiin maxaa naloo dooran waayey, oo na loogu garan waayey. Janada & madaxnimada midna laysagama tanaasulo, midkoodna muquuno laysuma siiyo. Madaxnimadu waa wax qiima badan, waxaa lagu iibsadaa wax kale oo qiima badan. Marka labada nin ee tartamaya mid intuu jilbaha ku qabsado kugu yidhaahdo waxaad doonto sheego oo i dooro, ka kalena intuu halkaa istaago uu yidhaahdo feedho iga garo. Ninka aad raacayso waad garanaysaa, dan iyo maslaxad baa laysku doortaa, ninkii maslaxad fiican ku tusa ayaana la doortaa. Ninkii taa fahmi waaya ee ku cawdaana waxaan filayaa nin ku nool meeraha Maaris.
4- Habar Yoonis haddaa tihiin waxaa nooshihiin waqti hore, waxaan idin kula talinayaa maanta noolaada. Haddii aad maantoo dhan tidhaahdo awoowyaasha ayaa sidan ahaan jirey waxba kaaga goynmayso waaqica maanta hortaada yaal, ee waxaa wax kuu goynaya waxaad maanta tahay. Maantana, maa sha allaah, ciddi idinkama fiicna.
5- Isaaq & Soomaalilaanba wax badan baa geliseen oo naf iyo maalba leh, magac iyo haybadna waa u sameyseen. Maanta wixii aa geliseen wax ka badan baa la doonayaa inaa gelisaan waayo maanta ayaa hawshu ugu culus tahay. Waan ogahay Isaaq baa u cadhaysan tihiin ee Soomaalilaan naf iyo maalba waa dul dhigaysaan. Midna aan wada xusuusnaano qolyahan reer Koonfureed ee doonaya natiijadii doorashadii SL (2017) iney innooga faa’iideystaan ama iney innagu qaybiyaan midkeena dan uma hayaan waxay doonayaan iney sidii seddexdii dibi inoo sii kala horeysiiyaan. ‘Nina haybta kuma raaci karo hooyo aan dhalin’ Salaan Carrabey.
Sacad Muuse-na hal baan idhi:-
1- Waxaa tihiin musdanbeedka Soomaalilaand ee aan mar qudha looga baqayn in xagooda looga soo dhaco. Waxaa tihiin bulsho dawlad ku nool ah oo jecel nidaamka iyo kala danbaynta dawladnimo.
2- Ceebtiinu waxaa weeye dhulka Soomaalilaan waxaa u taqaaniin inta u dhexaysa Bulaxaar- Xarshin- Gebiley iyo Waqooyiga Hargeysa. Taariikhda reer SL-na waxaa ka taqaaniin taariikhda Sacad Muuse waxaan idinkula talinayaa Soomaalilaan inaa balaadhkeeda soo aragtaan, bulshaweynta kale ee reer SL-na inaa taariikhdeeda soo barataan.
3- Soomaalilaan xoog, xoolo iyo nafba waa dul dhigteen, had iyo jeerna waxaa tihiin cida ugu difaaca badan qadiyada SL marka ay noqoto Social mediaha iyo dhinac kastaba sidaa daraadeed uma baahni inaan SL iyo ilaalinteeda idinku balamiyo waayo idinkaa iska balansan.
4- Waxa kaliya ee aan ka baqayaa waxaa weeye in annaaniyadiinu aakhirka SL kala dirto waayo dhaqanka wax wadaaga ayaa idinku yar. ilmaadeerta geelu isugu jiraa waxay ku wanaagsan tahay cantuug iyo mayee adigu horta cantuug sidaas bay geela ku wada ilaashadaan. Sidaas bay isu dhawrtaan, dhibkastana ugu wada babac dhigaan. Haddaa walaaloow ii cantuug ku dari lahaydeen raganimadiina kale cid aan idin dhaafsan lahaa ma jirteen.